China dara okomoko nkịta na-eri nri ngwa ngwa ngwa ngwa mmiri (A) ndị na-emepụta ihe na ndị na - eweta ya Shengrui
okomoko bulie nkịta na-eri nri efere ngwa ngwa ngwa ngwa mmiri (A)
Ihe nke ngwaahịa a bu ahihia Carbon / Stainless steel
Usoro anyị ji eme ihe bụ Laser Cut
N'ihi na nke, na anyị nwere mgbe size na anyị na-anabata ahaziri size
Ahaziri aghụghọ na logo ndị dịnụ
Maka Nkwakọ ngwaahịa, anyị na-eji igbe agba aja aja ma ọ bụ igbe agba ka ịhọrọ.
Na-adị mfe iri nri maka nkịta na nwamba dị iche iche. Ọ dịghị mkpa ịzụta feeder ọtụtụ anụ ụlọ n'ọkwá dị iche iche ọzọ.
Efere Nkịta Abụọ: E nwere efere efere nchara abụọ a na-ewepụ, dị mfe ịsacha & weta nhọrọ dị mma maka nkịta iri na ị drinkụ otu oge. ọ dịghị mkpa ka ị gbadata aka gị na ikpere iji mee ka ebe nri dị ọcha.
Zuru okè Nri Environment: kwụsịtụrụ igwe anaghị agba nchara nnukwu efere, nye a ọcha nri gburugburu ebe obibi. Kinddị nkịta nkịta a zụlitere na-enyere aka ịkwalite mmegharị nke nri, site n'ọnụ ya ruo afọ, na ogo dị mma na-ebelata nkịta olu nke nkịta mgbe ọ na-eri nri.
Ogologo oge: Ihe nchara igwe anaghị edozi ma sie ike karịa ihe ndị ọzọ dị ka achara, na-adịte aka maka ojiji.
Nke gara aga: Creative Geometric Wine ogbe Metal Wine njide.
Osote: Metal isi ogbe & Dog Leash hanga
Dog poop akpa dispenser metal Pita n'efu ojii ...